October Break Message – Mandalay International Science Academy
October Break Message
October 26, 2020 Wai Yan
First of all, we want to wishahappy and peaceful Thadingyut to all families celebrating this special occasion.
We have now reached the end of the first semester and, even though it has been challenging, we are happy to say that students are making real and measurable progress. There will be no classes this week, and the second semester will begin on Tuesday, November 3.
After collecting feedback from students, teachers and parents we have decided to update the school timetable. This will take effect from the first day of the second semester. The biggest change is that we have now included optional classes in the afternoons, meaning that students can rest of they need to.
For the second semester we haveaseries of special events and competitions lined up. In October, the English department will choose winners for the Halloween Spooky Story Competition. In November, there will be an online Art Exhibition and an “I miss my school” creative arts competition. In December, our Talent Show will return, and Mathemania will also take place. For the new year, there will be many other events for students to participate in. There will also be regular awards for students who use Reading Eggs and Mathletics frequently.
We ask parents to remind their children to regularly check their school emails, as this is where we will send the new timetable and other updates.
As always, please stay safe and send us any feedback you may have.
အောက်တိုဘာ အားလပ်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများကို အသိပေးခြင်း
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲကြမည့် မိသားစုများ အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ သတင်းကျွတ်ပွဲတော် အခါသမယ ဖြစ်ပါစေဟု ဦးစွာပထမ ဆန္ဒပြုပါသည်။ စိန်ခေါ်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း ပထမစာသင်နှစ်ဝက်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ တိုးတက်လာမှုကို တွေ့မြင်ရသည့်အတွက် လွန်စွာ၀မ်းသာမိပါသည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်တွင် စာသင်တန်းများရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဒုတိယစာသင်နှစ်၀က်အတွက် အတန်များကို နို၀င်ဘာလ ၃ ရက်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့တွင်ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဆရာဆရာမများ နှင့် မိဘများထံမှရရှိထားသော feedback များအရ အချိန်ဇယား အသစ်ပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယစာသင်နှစ်၀က်၏ ပထမဆုံးရက်တွင် ထိုအချိန်ဇယားအတိုင်း စာသင်ချိန်များကို သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ နေ့လည်ပိုင်း စာသင်ချိန်များကို ရွေးချယ်၍ရနိုင်သော အတန်းများ (optional classes)အဖြစ်စီစဉ်ထားပါသည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် အနားယူဖို့လိုအပ်လျှင်အနားယူနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယစာသင်နှစ်၀က်တွင် အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ပြိုင်ပွဲများရှိပါသည်။ အောက်တိုဘာလတွင် အင်္ဂလိပ်စာ ဌာနမှ Halloween Spooky Story ပြိုင်ပွဲအတွက် ဆုရသူများကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါသည်။ နို၀င်ဘာလတွင် online မှကျင်းပသော ပန်းချီပြပွဲနှင့် “I Miss My School” ခေါင်းစဉ်နှင့် ရေးချယ်ကြရမည့် ပန်းချီပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် Talent Show နှင့် Mathemania ပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်သစ်ကူးတွင်လည်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိူင်မည့် အခြားအစီအစဉ်များလည်းရှိပါသည်။ Reading Eggs နှင့် Mathletics မှသင်ခန်းစာများကို ပြုလုပ်သော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကိုလည်း ဆုများပုံမှန်ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အချိန်ဇယားအသစ် နှင့် ကျောင်းမှ ထပ်မံ၍ အသိပေးလိုသည်များကို ကလေးများ၏ email များမှ တစ်ဆင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်သောကြောင့် မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ကလေးများကို ကျောင်းမှပို့သော email များကို ပုံမှန်စစ်ပေးကြပါရန် သတိပေးစေလိုပါသည်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ မိဘများထံမှ feedback များကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်။
လေးစားစွာ Michael Garton ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး Mandalay International Science Academy
How Parents Can Help Their Kids With Studying
What’s Lost When We Rush Kids Through Childhood
Greetings from MSA administration
Regular School Announcement